🥇 ▷ Sidee loo tirtirayaa raaciyaha barta Instagram aniga oo aan ogayn ✅
Waxaa jira adeegsadeyaal jecel inay helaan kuwa raacsan ama kuwa raacsan barta Instagram-ka Iyo kuwa sii fiican. Kuwa kale, dhinaca kale, waxay degaan wax yar oo ay leeyihiin, kuwaas oo badanaa yaqaan dadka qoyska iyo saaxiibbada. Laakiin mararka qaarkood, koonto dowladeed waxay heli kartaa booqashada akoonnada aysan aqoon, wax xitaa xitaa cabsi gelin kara, ama si fudud waajibaadka culus ee aan u hoggaansanno sababtoo ah waa inaadeerkeen, ama saaxiib lammaane, iwm. The caadiga ah tiradaasi ma joojin karno ama kama joojin karno soo socda, laakiin kaas oo amarkii carrab la’aantu gaabinayso. Maxaa la sameeyaa? Haddii koontadaadu tahay mid gaar ah waxaad ku qasbi kartaa midka kaa joogsanaya, laakiin maahan haddii ay tahay mid dadweyne.
Asturnaanta iyo kuwa raacsan
Ku yeela koonto gaar ah barta Instagram Waxay u keentaa xasillooni badan macaamiisha. Mulkiiluhu wuxuu si buuxda gacanta ugu hayaa koontada, laga bilaabo markay arkaan farriimaha u yimaada adeegsadayaasha codsanaya dabagal. Tan dambe waa aasaasi, maxaa yeelay waxay kaa horjoogsaneysaa inaad u sheegto robots ama inaadan rabin in lagu raaco adigoo isla sidaas samaynaya. Si kastaba ha noqotee, isticmaaleyaasha leh akoonkooda ‘Instagram’ oo aan qarinin kuma raaxeystaan ​​xasilloonidaan, ama ugu yaraan hadda.
Taasi waa sababta shabakadaha bulshada ee xagaagii hore ay u hirgelisay hawl cusub taas oo siineysa ikhtiyaar ah in meesha laga saaro kuwa raacsan qof kasta oo leh akoon dowladeed, finaad ducaysato aamusnaan aamusnaan ‘taas aawadeed. Qofka raacayaa ma ogi inuu joojiyay soosocodkaaga, sidaasna wuu ku sii socon doonaa sidan ilaa uu ka fiirsanayo liistada dadka lala xiriirayo.
Oo waa in xannibaadda, qaasatan qof aan joojin karno raacitaankiisa, ay tahay wax had iyo jeer leh fikrado qallafsan. Waxaa jira kuwa aan dan ka lahayn oo aan gacmahooda ruxin markay qof xannibayaan, kuwa kalena waxay door bidaan xalal aan yarayn oo rabshado leh si looga takhaluso qof, sidaa darteed Instagram-ka ayay u abuureen shaqadan. Sida ku xusan qabashadaan kor ku xusan, adeegsadaha ma oga inuu isagu ka mid ahayn kuwa raacsan, iyo marka ay taasi dhacdo, waxaan abuuri karnaa cudurdaar. Waxay ku saabsan tahay inaad naftaada xoogaa yar ka siiso kuwa kula socda adigoon sameynin go’aan ka gaar ah akoonkaaga.
Tirtir kuwa aamusnaanta aamusnaan ku leh barta Instagram
In lagu qasbo aamusnaantaan aamusnaanta:
Wuxuu Furaa Instagram Y u gudub astaantaada -markaaga ku yaal dhinaca midig ee barta hoose
Gali kuwa raacsan ee aad haysatid –in Ehelka ku xiga sawirkaaga astaanta
Liiska furitaanka waa inaad ku aragtaa a seddex dhibic icon si toos ah u xigta magaca xiriirka. Hadaad riixdo. barnaamijku wuxuu ku siinayaa ikhtiyaarka aad ku qasbi karto inaad raacdo si uu u joojiyo soosocodkaaga, laakiin ku ogeysiin doono.